६० बर्ष भए उदित -पाँच पटक जिते फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड ।
Sat Feb 25, 2017 Studio Time: 17:22:57
मङसीर १५, काठमाण्डौ ।
गायक उदित नारायण झा आज आफ्नो ६० औ जन्मदिन मनाउँदैछन् । सन् १९५५ डिसेम्बर १ मा उदितको जन्म सप्तरी जिल्लामा भएको हो ।, आज हाम्रो भेट भाको दिन, नचिनेको झैँ गर्दैछौ कीन ? कस्ले देला तिम्लाई माया, कालो चस्मा, म सपनाको कुरा गर्छु, यो गाउँको कान्छो म, माझी दाईले ...जस्ता लोकप्रिय गीत उनै उदित नारायणले गाएका हुन् । कहिले तिम्रो पच्छ्यौरीमा,माया के होला, बेहुली...हामीले सुन्दै आएका यी गीत पनि उनकै हो । यीसँगै उनले सयौँ नेपाली गीतमा स्वर दिएका छन् । जुन गीत, जति पुराना भए पनि उत्तिकै मीठा सुनिन्छन् ।
उदितले, सांगितिक क्षेत्रमा उदाउन र चम्किन धेरै संघर्ष गरेका छन् । उनले भोगेको आर्थिक अभाव, काठमाण्डौ र बलिउडमा गर्नुपरेको संघर्ष निक्कै मर्मष्पर्सी छ । तर, लामो दौडका लागि निस्केको घोडा झैँ जुझारु, उदित यस्ता संघर्ष गर्न डराएनन् । बरु मेहेनतलाई जारी राखे । र पुगे रेडियो नेपालको स्टुडियोमा । त्यहीँबाट औपचारिक गायन सुरु गरेका उदितले चलचित्र सिन्दुरमा पनि गाउने मौका पाए । त्यो नै उनको नेपाली चलचित्रका लागि पहिलो गायन थियो ।
उदितलाई नेपाली गायन क्षेत्रसँगै बलिउडमा पनि चम्किने रहर थियो, सायद । त्यसैले उनी, सन् १९७८ मा भारत हान्निए । भारत गएर बलिउडमा चम्किने उनको सपना बिस्तारै फुल्दै गयो । र त उनले, ले के प्यार की चुनरिया, अच्छी लग्ती हो, अगर तुम मिल जाओ, दिल ले गई तेरी बिन्दियाँ...जस्ता सुपरहिट गीत दिएका छन् दर्शक, श्रोतालाई । कयामत से कयामत तकमा उनले गाएको , पापा कहतेहे बडा नाम करेगा बोलको गीत अझै धेरै सुनिने गीत हो । उनले यसै गीतबाट , बेस्ट मेल सिगंरका लागी फिल्मफेयर अवार्ड पाएका छन् । सन् १९८० मा पहिलोचोटी हिन्दी सिनेमामा गाउने मौका पाएका झाले अहिलेसम्म कति गीत गाए, त्यसको रेकर्ड पनि सायदै होला । जादु झैँ लाग्ने उनको आवाज मन नपराउने को होलान् ? उनले सांगितिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको बयान जति गरे पनि कमै होला । उदितलाई, सांगितिक क्षेत्रमा अमुल्य योगदान पु¥याएबापत नेपाल, भारत र अन्य देशमा सम्मान गरिएको छ । उनी, सन् २००९ मा भारत सरकारको पद्यश्री अवार्डबाट पनि सम्मानित भईसकेका छन् । योसँगै, बलिउडमा सबैभन्दा सम्मानित मानिने फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड पाँचचोटी आफ्नो पोल्टामा पारीसकेका छन् । यस्तै, उनले तीन–तीन पटक न्याश्नल अवार्ड पनि जितीसकेका छन् । जादु झैँ सुन्दर स्वरमा उनले झण्डै ६० भाषाका १५ हजार भन्दा बढी गीत गाएका छन् ।
उदितको पारिवारिक वातावरण पनि सांगितिक छ । उनी अझै गायनमा सक्रिय छन् भने , उनकी श्रीमती दीपा झा पनि गाउँछिन् । उनका छोरा आदित्य पनि बलिउडमा स्थापित भईसकेका छन् । उदितको पहिलो श्रीमतीसँग भने सम्बन्ध राम्रो छैन ।